उद्योगमन्त्रीलाई धम्की दिने को र केका लागि ? – www.agnijwala.com
उद्योगमन्त्रीलाई धम्की दिने को र केका लागि ?
काठमाडौं । बहालवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लाई ज्यान मार्ने धम्कि दिनेको होला ? आज मन्त्री लेखराज भट्टले आफुलाइ ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका छन् । उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई समर्थन गरेमा आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताए।
बिहीबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले बझाङबाट एक जनाले टेलिफोन गरेर टाउको काट्ने धम्की दिएको बताएका हुन् ।
‘मलाई बझाङबाट फोन गरेर एकजनाले एमसीसीको पक्षमा बोले जहाँ भेट्यो त्यहीँ टाउको काट्छु भनेर धम्की दिनु भएको छ’ उनले भने, ‘मैले एमसीसीबारे के अध्ययन गर्नुभएको छ भनेर सोध्दाचाहिँ उहाँले थाहा छैन भन्नु भयो ।’ संसद उद्योग, बाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेटवर्किङ बिजनेश बारेको छलफलमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा पनि एमसीसीमा जस्तै मान्छेले बुझ्दै नबुझी विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेको उनले दावी गरे । नेपालमा कुनै पनि विषयमा पढ्दै नपढी प्रतिक्रिया जनाउने प्रचलन बढ्दै गएको उनले बताए । ‘हाम्रो प्रवृत्ति भित्र के छ भन्ने नबुझी, नहेरी सुनी सुनाईका कुरामा गइराछ’ उनले भने । सबैलाई जानकारी छ प्रचण्ड कोटाबाट मन्त्री बनेका भट्ट अहिले ओलि खेमामा पुगेका छन।